1 Ndị Kọrịnt 11 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Albanian Sign Language Alur American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Dangme Danish Drehu Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Flemish Sign Language French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Greenlandic Guambiano Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Iban Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Creole Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kenyan Sign Language Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Krio Kwangali Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Macushi Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Maya Melanesian Sign Language Mexican Sign Language Mixtec (Guerrero) Moore Motu Mozambican Sign Language Myanmar Myanmar Sign Language Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali New Zealand Sign Language Nhengatu Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Punjabi (Roman) Páez Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quechua (Huaylla Wanca) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rapa Nui Romanian Romanian Sign Language Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sateré-Mawé Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkish Sign Language Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Vietnamese Sign Language Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
Akwụkwọ Ozi Mbụ E Degaara Ndị kọrịnt 11:1-34
“Na-emenụ ka m” (1)
Onye bụ́ onyeisi na ikpuchi isi (2-16)
Otú a ga-esi na-eri Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị (17-34)
11 Na-emenụ ka m,* otú mụnwa si eme ka Kraịst.+ 2 Ụmụnna m, unu emeela maka otú unu si echeta m n’ihe niile, nakwa maka otú unu si eme ihe niile m kụziiri unu. 3 Ma, achọrọ m ka unu mara na Kraịst bụ onyeisi nwoke ọ bụla.+ Nwoke bụ onyeisi nwaanyị,+ Chineke bụkwa onyeisi Kraịst.+ 4 Nwoke ọ bụla nke kpuchiri isi ya na-ekpe ekpere ma ọ bụ na-ebu amụma na-emenye onyeisi ya ihere. 5 Ma, nwaanyị ọ bụla na-ekpuchighị isi ya na-ekpe ekpere ma ọ bụ na-ebu amụma+ na-emenye onyeisi ya ihere, n’ihi na ya na nwaanyị kpụrụ isi ya akpụ bụ otu. 6 N’ihi ya, ọ bụrụ na nwaanyị anaghị ekpuchi isi ya, ya kpụọ isi ya. Ma, ọ bụrụ na ihere na-eme nwaanyị ma ọ kpụọ isi ya ma ọ bụ kpachapụ ntutu isi ya, ya kpuchie isi ya. 7 Nwoke ekwesịghị ikpuchi isi ya, n’ihi na Chineke kere ya n’oyiyi ya+ nakwa n’ebube ya. Ma nwaanyị bụ ebube nwoke. 8 N’ihi na Chineke esighị n’ahụ́ nwaanyị kee nwoke, ma, o si n’ahụ́ nwoke kee nwaanyị.+ 9 Chineke ekeghịkwa nwoke n’ihi nwaanyị, ma, o kere nwaanyị n’ihi nwoke.+ 10 N’ihi ihe a nakwa n’ihi ndị mmụọ ozi,+ nwaanyị kwesịrị ikpuchi isi ya, ka o gosi na ọ nọ n’okpuru nwoke. 11 N’ọgbakọ Onyenwe anyị, nwaanyị enweghị ike ịdị ma nwoke adịghị, nwoke enweghịkwa ike ịdị ma nwaanyị adịghị. 12 N’ihi na otú ahụ o si bụrụ na e si n’ahụ́ nwoke kee nwaanyị,+ ka o sikwa bụrụ na nwaanyị na-amụ nwoke. Ma, ọ bụ Chineke kere ihe niile.+ 13 Chegodịnụ ma ò kwesịrị ekwesị ka nwaanyị ghara ikpuchi isi ya mgbe ọ na-ekpe ekpere. 14 Otú e si kee mmadụ ọ́ naghị akụziri unu na nwoke na-emenye onwe ya ihere ma ọ hapụ ntutu isi ya ka o too ogologo? 15 Ma, ọ bụrụ na nwaanyị ahapụ ntutu isi ya ka o too ogologo, ọ́ naghị eme ka a na-aja ya mma? N’ihi na Chineke nyere nwaanyị ogologo ntutu isi kama inye ya ákwà isi. 16 Ma, ọ bụrụ na e nwere onye na-ekwetaghị ihe a, gwanụ ya na o nweghị otú ọzọ ọgbakọ Chineke si eme ya. 17 Ma, ọ bụ eziokwu na m na-agwa unu ihe ndị unu kwesịrị ịna-eme, anaghị m aja unu mma, maka na nzukọ unu na-enwe na-aghọ unu ahịa kama ịbara unu uru. 18 N’ihi na ana m anụ na unu na-akpa iche iche n’ọgbakọ unu ma unu zukọọ. Ọ dịkwa m ka ọ̀ bụ eziokwu. 19 Ya bụrụ otú ahụ, ọ ga-abụrịrị na òtù dị iche iche dịzi n’ọgbakọ unu,+ ka e si otú ahụ mata ndị omume ha dị Chineke mma n’ime unu. 20 Ọ na-abụ unu zukọọ otu ebe maka iri Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị,+ unu anaghị eri ya otú kwesịrị ekwesị. 21 N’ihi na ọ na-abụ tupu oge unu ga-eri ya eruo, ụfọdụ n’ime unu na-ebu ụzọ rie nri anyasị nke ha, nke mere na agụụ na-agụ ụfọdụ, mmanya ana-egbu ụfọdụ. 22 Ọ̀ bụ na unu enweghị ụlọ unu ga-anọ rie ihe ma ṅụọ mmanya? Ka ùnu na-eleda ọgbakọ Chineke anya ma na-eme ka ihere mee ndị na-enweghị ihe ọ bụla? Gịnị ka m ga-agwa unu? Ọ̀ bụ m jawa unu mma? Mbanụ. Agaghị m aja unu mma n’ihe a unu na-eme. 23 N’ihi na ọ bụ ihe Onyenwe anyị kụziiri m ka m na-akụziri unu. N’abalị ahụ+ a ga-arara Onyenwe anyị Jizọs nye n’aka ndị iro ya, o weere otu ogbe achịcha. 24 Mgbe o kelechara Chineke, ọ nyawara ya, sị: “Nke a pụtara ahụ́ m,+ nke m ga-enye n’ihi unu. Na-emenụ nke a iji na-echeta m.”+ 25 Mgbe ha richara nri anyasị,* o buuru iko, meekwa otu ihe ahụ.+ Ọ sịrị: “Iko a pụtara ọgbụgba ndụ ọhụrụ+ nke ga-enwe isi mgbe m wụpụrụ ọbara m.+ N’oge niile unu na-aṅụ ihe dị n’ime iko a, na-emenụ ya iji na-echeta m.”+ 26 N’ihi na n’oge niile unu na-ata achịcha a ma na-aṅụ mmanya dị n’iko a, unu na-ekwusa ọnwụ Onyenwe anyị, ruo mgbe ọ ga-abịa. 27 N’ihi ya, onye ọ bụla na-erughị eru taa achịcha ahụ ma ọ bụ ṅụọ mmanya dị n’iko Onyenwe anyị emehiela ahụ́ na ọbara Onyenwe anyị. 28 Ka mmadụ buru ụzọ nyochaa onwe ya.+ Ọ bụrụ na ọ chọpụtakwa na ya ruru eru, ya taa achịcha ahụ ma ṅụọ mmanya dị n’iko ahụ. 29 N’ihi na ọ bụrụ na mmadụ na-ata achịcha a ma na-aṅụ mmanya dị n’iko a, ma ọ maghị na ha nọchiri anya ahụ́ Onyenwe anyị, ọ na-ama onwe ya ikpe. 30 Ọ bụ ya mere na ọtụtụ n’ime unu adịghị ike, ọtụtụ na-arịa ọrịa, ọtụtụ anwụọkwala.*+ 31 Ma ọ bụrụ na anyị nyochara onwe anyị nke ọma, a gaghị ekpe anyị ikpe. 32 Ma, ọ bụrụ na anyị enyochaghị onwe anyị, a na-ekpe anyị ikpe, Jehova* na-esikwa otú ahụ gbazie anyị,+ ka a ghara ịmakọ anyị na ụwa ikpe.+ 33 N’ihi ya, ụmụnna m, mgbe unu zukọtara iri ya, cherenụ ibe unu. 34 Ọ bụrụ na e nwere onye agụụ na-agụ, ya rie ihe n’ụlọ, ka ọ ga-abụ unu zukọta, a gaghị ekpe ya ikpe.+ Ma, m ga-edozi okwu ndị fọdụrụ mgbe m rutere ebe ahụ.
^ Ma ọ bụ “Na-eṅominụ m.”
^ Ya bụ, nke Ememme Ngabiga.
^ Ọnwụ a abụghị ọnwụ nkịtị. Kama ọ pụtara na ndị ahụ na Chineke adịghịzi ná mma.
1 Ndị Kọrịnt 11